J 147 poda (1146963-51-0) | neuroprotective uye neurotrophic compound
/ Products / Nootropics powder / J 147 upfu
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika kuhutachire hweJ 147 powder (1146963-51-0), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
J147 upfu yakatanga kugadzirwa mu2011, uye vatsvakurudzi vakaita zvidzidzo zvakawanda zvinoratidza kuti zvinogona kuchinja kukanganwa kwekurangarira uye kunonoka kana kushandura kuAlzheimer mumakonzo. Asi kusvikira ichi chidzidzo, vakanga vasingazivi kuti zvakashanda sei mumasero. Vakakwanisa kuratidza kuti pfupa reJ147 rinoshanda nekushandisa ATP, puroteni mu mitochondria uye nemuviri wesimba rine simba. Apo J147 powder yakanga iripo, neuroni dzakadzivirirwa kubva kune zvinokonzerwa neutano. Zvimwe zviongorori zvakaratidza kuti J147 powder inowedzera mazinga eAAT uye inosimudzira mitechondria yakagwinya, yakasimba
Molecular Kurema: 350.3349896
Raw J 147 powder mukuwedzera huropi hunoita uye humwe huwandu hwekuwedzera
J 147 (1146963-51-0) Mishonga yekushandisa
Tichishandisa chirongwa chekutsvaga zvinodhaka chechirwere cheAlzheimer (AD) icho chakavakirwa pane dzakawanda pathologies zvekukwegura, isu takaratidza chakakombama chinobatanidzwa nehunyanzvi mukukanganisa ndangariro uye AD mhuka mhando. Sezvo ichi chigamba, J-147 poda, iri phenyl hydrazide, pakanga paine kunetsekana kuti inogona kugadziriswa kune anonhuwirira amines / hydrazines ayo anogona kunge ari carcinogenic. Kuti tiongorore mukana uyu, takaongorora metabolites yeJ 147 poda muvanhu uye mbeva microsomes uye mbeva plasma. Inotaridzwa kuti J-147 (1146963-51-0) poda haina kugadziridzwa kune anonhuwirira amini kana mahydrazines, kuti scaffold yakanyatsogadzikana, uye kuti iyo oxidative metabolites zvakare iri neuroprotective. Izvo zvinogumiswa kuti makuru metabolites eJ 147 (1146963-51-0) poda inogona kubatsira kune yayo zviitiko zvehupenyu mumhuka.
J 147, yakatorwa kubva ku curry spice chinhu curcumin, ine yakaderera chepfu uye inodzosera kukuvara mueuroni inosangana neAlzheimer's.
J 147 (1146963-51-0) yaiva protochondrial protein inozivikanwa seAtP synthase, kunyanya ATP5A, chikamu cheprotini iyoyo. ATP synthase inobatanidzwa muchizvarwa chemitochondrial cheAAT, iyo masero anoshandisa simba.
Vatsvakurudzi vakaratidza kuti nekuderedza basa reAtp synthase, vakakwanisa kuchengetedza masero e-neuronal kubva kune zvakashata zvinokonzerwa nekukwegura kweuropi. Chimwe chikonzero cheiuroprotective effect iyi inofungidzirwa kuti iyo inobatsira yeexitotoxicity mu neuronal cell kusakara.
Excitotoxicity ndiyo chirwere chinokonzerwa neuroni uye chakaurayiwa nekugadziriswa kwemakagadziri emucherechedzo wekunakidza neurotransmitter glutamate. Funga nezvazvo sechinhu chakaita sechitsinho chechiedza chiri kushandurwa uye chichibhururuka zvakakurumidza zvokuti chinopedzisira chichiita kuti bhozo rekuvhenekera rive.
Munguva pfupi yapfuura, basa reAtP synthase inhibition nokuda kwemauroprotection contre marital excitotoxic rakaratidzwa mukudzidza kweguru . Chidzidzo chechipiri chakaratidza kuti maonde akaratidza maitiro evanhu eAtantase mutant inhibitory factor 1 (hIF1), iyo inokonzera kusachengetedzwa kwakasimba kweAtP synthase, yakanyanya kugadzikana neuronal kufa mushure mekuvhiringidzwa kweexitotoxic. Iyi dheta inopindirana neyiyi itsva yeJ 147 yekudzidza, umo kuwedzera kwe IF1 mumakonzo kwakaderedza basa reAtP synthase (kunyanya ATP5A) uye raive neuroprotective.
Dhiyabhorosi inoratidzwa pano inoratidza kuti J-147 powder inokwanisa kukonzera kukanganisa kwepfungwa apo inoshandiswa pakupedzisira kwechirwere ichi. Kukwanisa kweJ-147 powder kunatsiridza chiyeuchidzo kune vakwegura AD mice inobatanidzwa neyo induction ye neurotrophic zvinhu NGF (nerve growth factor) uye BDNF (ubongo hunogadziriswa neurotrophic factor) pamwe neBDNF yakawanda-inogadzirisa mapuroteni anokosha pakudzidza uye kuyeuka. Kuenzanisa pakati peJ-147 (1146963-51-0) powder uye zvakagadziriswa mu scopolamine model yakaratidza kuti kunyange zvazvo mapurisa maviri akafanana nekudzikinura nguva shoma kwenguva refu, J-147 powder yakanga iri nani pakununura mamiriro ekumusoro uye kusanganiswa kweiviri yakashanda zvakanakisisa nokuda kwenyaya nemakakungwa.
Chirwere cheAlzheimer chirwere chepfungwa chinopfuurira mberi, chave chichionekwa sechitatu chekutungamirira kwekufa muUnited States uye chinokanganisa mamiriyoni mashanu eMelika. Ndicho chikonzero chinowanzokonzera demoenti kune vakwegura vakuru, maererano neNational Institutes of Health. Kunyange zvazvo mishonga yakawanda yakagadzirwa mumakore akapfuura e20 inotarisirwa kuti amyloid plaque igare muuropi (iyo inoratidza chiratidzo chechirwere), vashomanana vakaonekwa kuti vanobudirira muchechi.
"Kunyange zvazvo mishonga yakawanda yakagadzirwa mumakore ekupedzisira e20 inotarisirwa kuti majoi amyloid agone muuropi (iyo inoratidza chiratidzo chechirwere), hapana ane uchapupu hunoshanda muchechi," anodaro Schubert, mukuru munyori wekudzidza.
Makore anoverengeka adarika, Schubert nevamwe vake vakatanga kuswedera pakurapwa kwechirwere kubva kune imwe nzvimbo. Panzvimbo pekutsvaga zvinyorwa zvebazi, tebhu yakasarudza kusvika zero pane chikuru chinokonzerwa nehutano hwehutano. Kushandisa sero-based screens maererano nehutano hwehutano hunosangana nezera rekare, vakagadzira J 147 (1146963-51-0) powder.
Pakutanga, timu yacho yakaona kuti J-147 poda inogona kudzivirira uye kutodzosera kurasikirwa ndangariro uye chirwere cheAlzheimer mumakonzo ane vhezheni yefomu rakagarwa nhaka Alzheimer's, inonyanya kushandiswa mbeva modhi. Nekudaro, iri fomu rechirwere rinongova neinenge 1 muzana yezviitiko zveAlzheimer's. Kune vamwe vese, kuchembera ndiyo inonyanya kukonzera njodzi, anodaro Schubert. Chikwata ichi chaida kuongorora zvinokonzereswa nemumiriri wemishonga parudzi rwe mbeva dzinokura nekukurumidza uye nekuwana vhezheni yedhementia iyo yakafanana zvakanyanya nedambudziko revanhu rine chekuita nezera.
J 147 Mvura Yakakosha
Nzira yekutenga J 147 poda kubva kuAASraw